WARBIXIN: Mid ka mid ah xiddigaha Man United oo si cad u sheegay inuu jeclaan lahaa in loo magacaabo kabtanka kooxda… (Mana ahan Pogba iyo Young) – Gool FM
(Manchester) 22 Luulyo 2019. Mid ka mid ah xiddigaha mudada joogay Manchester United ayaa shaaca ka qaaday inuu jeclaan lahaa in loo magacaabo kabtanka joogtada ah ee kooxda.
Goolhaye David de Gea ayaa jeclaan lahaa in loo magacaabo kabtanka Manchester United, iyadoo shabaq ilaaliyahan uu isku diyaarinayo inuu ballaariyo heshiiska uu ku sii joogayo kooxda.
Warsidaha PA ayaa fahamsan in 28-sano jirkaan uu isku diyaarinayo inuu qalinka ku duugo heshiis uu ku noqonayo goolhayaha ugu mushaarka badan caalamka, kaasoo ay u badan tahay inuu garoonka Old Traffrod ku sii haayo illaa sanadka 2025-ka.
Dea Gea ayaa diiradda saaraya mustaqbalka kooxdiisa, waxaana uu si cad u sheegay inuu jecel yahay inuu noqdo kabtanka Manchester United, iyadoo macallin Ole Gunnar Solskjaer uusan calaamadda hoggaaminta si joogto ah ciyaaryahan ugu dhiibin tan iyo bixitaankii xagaaga ee Antonio Valencia.
“Waxaan ahaa kabtan kulammada qaarkood,” ayuu yiri goolhaye De Gea, “Dabcan waa cajiib inaad kabtan u noqoto koox sida Manchester United oo kale ah iyo inaad difaacdo caalmaddaan.”
“Waa cajiib, sidaasi darteed dabcan waan noqon doonaa, runtii waa ku faraxsanahay kabtanka.”
De Gea ayaa garoonka Old Trafford kaga soo dhaqaaqay kooxda Atletico Madrid sanadkii 2011-kii, waxaana uu noqday mid ka mid ah goolhayeyaasha ugu fiican adduunka.
Waxaa loo magacaabay ciyaaryahanka sanadka ee kooxda muddo rikoor afar jeer ah, De Gea ayaana doonaya inuu kooxda ka caawiyo inay markale u tartanto koobab.
“Waa xilli ciyaareedkeygii sagaalaad, waxaan dareemayaa sida inaan ahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu khibrad badan,” ayuu yiri markale De Gea.
“Waxaan u baahanahay in aan ku muujiyo garoonka gudihiisa, islamarkaana aan isku dayo inaan ka caawiyo xiddigaha da’da yar inay ogaadaan waxa ay macnaheedu tahay Manchester United, taas ayaa muhiim ah.”
“Waa inaan horumar sameynnaa, waxaan nahay Manchester United, waxaan u baahannahay inaan u dagaallano koobab.”